Madal ay ku mideysanyihiin siyaasiyiin badan oo looga dhawaaqay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madal ay ku mideysanyihiin siyaasiyiin badan oo looga dhawaaqay Muqdisho
Mareeg.com: Shalay waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay shir ay ku midoobeen Xildhibaano, wasiiro, xisbiyo iyo ururo siyasadeed.
Wasiirada iyo xildhibaanada Isbaheysigaas ku jira ayaa ah xubnihii taageersanaa R/wasaarihii la riday C/weli Sheekh Axmed.
Xisbiyada ka qeybgalay Shirka Madasha Midnimada iyo Dimoqraadiyadaga ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah Xisbiga Midnimo Qaran ee uu hogaamiyo Dr. C/raxmaan Macallin C/llaahi (Baadiyow).
Qoraal lag soo saaray shirkaas ayaa u qornaa sidan:-
Annaga oo ah saxiixayaasha bayaanka (manifestada) lagu assaasay Madasha Midnimada iyo Dimoqraadiyada, kana kooban xildhibaanno
(No….), siyaasiyiin (….), xisbiyo (….) iyo madalo siyaasadeed (….), waxaan shacbiga Somaaliyeed usoo bandhigeynaa dhaqan cusub ee siyaasadeed oo aan ku saleysneyn qabiilnimo, saldhigeedu yahay isbaheysi siyaasadeed oo ballaaran, una furan dhammaan muwaadiniinta Somaaliyeed. Waxaa kale oo isbaheysigaan u furanyahy, mudnaan gaar ahna siinayaa dhallinyarada iyo ururradooda isbedel-doonka ah.
Naceybka Muslimiinta oo kusoo badanaya Yurub